သငျတို့မှာ အဖေ အမေ မိဘရှိနသေေးတယျဆိုရငျ အခြိနျမရလဲ ( ၂ ) မိနဈစာလောကျ ခဏဝငျ၍ ဖတျကွညျ့ပေးစခေငျြတယျ – Cele Lover
မနကျ 11 : 30 အခြိနျလောကျ ရှိနပွေီ လမျးဘေးက ကျောဖီဆိုငျရဲ့မွတေလငျးပွငျလေးမှာ ( ၇၅ ) နှဈ အရှယျ ၊ အမအေို တဈယောကျနဲ့တှတေ့ော့ စကားမစပျ မေးမိပါတယျ
အမေ ဒီမှာ ဘာထိုငျလုပျနတောလဲ လို့ပေါ့ ခြိ့နဲ့နဲ့ အားအငျလေးနဲ့ ထကာ ကတုနျကယငျ အသံလေးတှနေဲ့အမအိုပွောပုံက သားနဲ့ / သမီး လှဲလိုကျတဲ့ ပိုကျ ဆံလာထုပျတာပါ ဘဏျရုံးမဖှငျ့သေးလို့. ခနထိုငျစောငျ့နတောပါတဲ့ ၊၊
အမေ ဘာစားပွီးပွီလဲ မေးတော့ ဘာမှ့မစားရသေးပါဘူး သားရယျ မနကျကတညျးက ရုံးဖှငျမညျ့ အခြိနျကို စောငျ့နတောလာပါ အမေ ဆိုပွီးမုနျ့ဟငျးခါး ဆိုငျဘေးနားက ထမငျးဆိုငျလေးမှာ အမအေို အတှကျ ထမငျးပှဲလေး မှာပွီး စီစဉျပေးလိုကျတယျ ၊၊
ဖုနျးနံပတျ သိလား အမေ ဒါပဲ သား ဒိဖုနျးနံပါတျပဲဆိုပွီး ပွရေငျးဆိုရငျး အမအေိုက ဖုနျးကိုဖှငျ့ကာနံပတျတှအေား နှိပျတော့တယျ ၊၊
လကျတှေ တုနျနတောမို့ ၊ နှိပျ့၍ မရပေ ၊၊ ကြှနျတျောလညျး ဖုနျးနံပတျကို အတိအကြ နှိပျ့ပွီး ဖုနျးချေါကွညျ့တော့ဖုနျးဝငျသှားတယျဗြ့ ( ဟဲလို ) အကို ဒီမှာ အကိုရဲ့အမေ ဘဏျရုံးမှာ လှဲပေးတဲ့ . အကိုပိုကျဆံအခြို့ကိုလာပွီး ထုပျတယျ ၊၊
အကို လှဲပေးလိုကျပွီလား လှဲမပေးပါဘူး ပိုကျဆံရှာရတာ လှယျတာ မဟုတျဘူးကှ အိမျလညျး ပွနျလာမအားဘူး အလုပျရူပျနတေယျကြှနျတျော အဖှားအိုဘကျ တဈခကျြလှညျ့ကွညျ့တော့ ပွုံးစိစိနဲ့ အဖှားကလုပျနတေယျ ၊၊
ငါ့သားလေးက ငါ့ကို လှမျးနတေဲ့ အကွောငျးတှေ ပွောနတော ဖွဈမယျဆိုပွီး အဖှားက ပွုံးပွုံးလေးနဲ့ ပွောပွနတေယျ ၊၊( ဟဲလို ) အကို အေး.. ပိုကျဆံ လှဲမပေးတော့ဘူးလို့ ပွောလိုကျ အဲ့အဖှားကွီးကို ပွီးတော့ ငါကဒီမှာမိသားစု့ရှိနပွေီ
ပြျောပြျောရှငျရှငျလေး နပေါရစကှော ၊၊လာမနှောကျယှကျပါနဲ့လို့ ပွောလိုကျ အဖှားကွီးကို .ဒါပဲ ဖုနျးခပြွီဖုနျးပွောပီးအခြိနျမှာ အမအေိုက သားဘာပွောလဲဟငျ ၊၊ အမကေို့ နကေောငျးလားလို့မေးတယျမလား ၊၊ အိမျပွနျလာမယျလို့ရော ပွောသေးလား .အမအေို ကွားခငျြနတေဲ့ စကားတှေ ကြှနျတျော လိမျညာပီး ဖွညျ့ပွောပေးရမှာလား ၊၊
သားသမီးတှရေဲ့ စကားတှကေို ပွနျပွောပွလိုကျရငျ အမအေို ရငျကှဲပကျလကျဖွဈသှားမှာ စိုးတယျ ကြှနျတျော ထိနျးမရတဲ့ မကျြရညျတှနေဲ့.ငိုခပြဈလိုကျတယျ ၊၊အမရေဲ့ အဖွဈကို ကွညျ့ပွီး ရငျ့ကြိုးမရဖွဈခဲ့မိတယျ ကြှနျတျောငိုတာကို အမအေိုက မွငျတော့ ဘာလို့ ငိုနတောလဲ သား သွျော အမရေဲ့.(
သားသမိးတှဆေီက ဝမျးသာတဲ့ စကားကွားရလိူ့ပါ ဒါကွောငျ့ငိုတာပါ အမလေို့ပွနျပွောရငျး.ကြှနျတျော အမအေိုကို အိမျချေါသှားတယျ ၊၊
အိမျပွနျရောကျတော့ ယူပါ အမေ. ဒါက အမရေဲ့ သားသမီးဆီက လှဲပေးတဲ့ ငှတှေပေါ တကယျတော့ အဖှားအို မသိအောငျကြှနျတေျာ့ရဲ့. ပိုကျဆံအိပျထဲက. ငှေ ( ၂ )သိနျးကို ထုတျပွီး
အဖှားအိုအတှကျ ကနျတော့လိုကျတာပါ ကြေးဇူးမသိတဲ့ သားတှေ ၊ သမီးတှအေတှကျ ရငျလေးမိပါတယျ ၊၊မုနျးလညျး မုနျးတီးမိပါတယျ ၊၊
ရှာမကြှေးခငျြနပေါ ဒုက်ခမပေးကွပါနဲ့. လုပျမကြှေးခငျြနပေါ မစျောကားကွပါနဲ့မိဘ ကြေးဇူးသိတတျပွီး ကြေးဇူးဆပျနိုငျကွတဲ့ သားကောငျး ၊ သမီးကောငျး ရတနာလေးမြားဖွဈနိုငျကွပါစေ
သင်တို့မှာ အဖေ အမေ မိဘရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် အချိန်မရလဲ ( ၂ ) မိနစ်စာလောက် ခဏဝင်၍ ဖတ်ကြည့်ပေးစေချင်တယ်
မနက် 11 : 30 အချိန်လောက် ရှိနေပြီ လမ်းဘေးက ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့မြေတလင်းပြင်လေးမှာ ( ၇၅ ) နှစ် အရွယ် ၊ အမေအို တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တော့ စကားမစပ် မေးမိပါတယ်
အမေ ဒီမှာ ဘာထိုင်လုပ်နေတာလဲ လို့ပေါ့ ချိ့နဲ့နဲ့ အားအင်လေးနဲ့ ထကာ ကတုန်ကယင် အသံလေးတွေနဲ့အမအိုပြောပုံက သားနဲ့ / သမီး လွှဲလိုက်တဲ့ ပိုက် ဆံလာထုပ်တာပါ ဘဏ်ရုံးမဖွင့်သေးလို့. ခနထိုင်စောင့်နေတာပါတဲ့ ၊၊
အမေ ဘာစားပြီးပြီလဲ မေးတော့ ဘာမှ့မစားရသေးပါဘူး သားရယ် မနက်ကတည်းက ရုံးဖွင်မည့် အချိန်ကို စောင့်နေတာလာပါ အမေ ဆိုပြီးမုန့်ဟင်းခါး ဆိုင်ဘေးနားက ထမင်းဆိုင်လေးမှာ အမေအို အတွက် ထမင်းပွဲလေး မှာပြီး စီစဉ်ပေးလိုက်တယ် ၊၊
နေ့လယ်အချိန် ရောက်လာတော့ ရုံးက မဖွင့်သေးဘူး ဒီနေ့ရုံးပိတ်များလား မသိဘူး သေချာအောင်အမေ့ သားသမီးတွေဆီ ဖုန်းဆက်ကြည့်ပါ့လား ဖုန်းပါလား မေးလိုက်တော့ ပါတယ် ပါပါတယ် သားရယ် ပြောကာအိပ်ထဲက. ဖုန်းလေးကို မမျိတမိ ဆွဲပြီကျွန်တော် ကို လှမ်းကြည့်နေတယ် ၊၊
ဖုန်းနံပတ် သိလား အမေ ဒါပဲ သား ဒိဖုန်းနံပါတ်ပဲဆိုပြီး ပြေရင်းဆိုရင်း အမေအိုက ဖုန်းကိုဖွင့်ကာနံပတ်တွေအား နှိပ်တော့တယ် ၊၊
လက်တွေ တုန်နေတာမို့ ၊ နှိပ့်၍ မရပေ ၊၊ ကျွန်တော်လည်း ဖုန်းနံပတ်ကို အတိအကျ နှိပ့်ပြီး ဖုန်းခေါ်ကြည့်တော့ဖုန်းဝင်သွားတယ်ဗျ့ ( ဟဲလို ) အကို ဒီမှာ အကိုရဲ့အမေ ဘဏ်ရုံးမှာ လွှဲပေးတဲ့ . အကိုပိုက်ဆံအချို့ကိုလာပြီး ထုပ်တယ် ၊၊
အကို လွဲပေးလိုက်ပြီလား လွဲမပေးပါဘူး ပိုက်ဆံရှာရတာ လွယ်တာ မဟုတ်ဘူးကွ အိမ်လည်း ပြန်လာမအားဘူး အလုပ်ရူပ်နေတယ်ကျွန်တော် အဖွားအိုဘက် တစ်ချက်လှည့်ကြည့်တော့ ပြုံးစိစိနဲ့ အဖွားကလုပ်နေတယ် ၊၊
ငါ့သားလေးက ငါ့ကို လွမ်းနေတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောနေတာ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး အဖွားက ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ပြောပြနေတယ် ၊၊( ဟဲလို ) အကို အေး.. ပိုက်ဆံ လွဲမပေးတော့ဘူးလို့ ပြောလိုက် အဲ့အဖွားကြီးကို ပြီးတော့ ငါကဒီမှာမိသားစု့ရှိနေပြီ
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေး နေပါရစေကွာ ၊၊လာမနှောက်ယှက်ပါနဲ့လို့ ပြောလိုက် အဖွားကြီးကို .ဒါပဲ ဖုန်းချပြီဖုန်းပြောပီးအချိန်မှာ အမေအိုက သားဘာပြောလဲဟင် ၊၊ အမေ့ကို နေကောင်းလားလို့မေးတယ်မလား ၊၊ အိမ်ပြန်လာမယ်လို့ရော ပြောသေးလား .အမေအို ကြားချင်နေတဲ့ စကားတွေ ကျွန်တော် လိမ်ညာပီး ဖြည့်ပြောပေးရမှာလား ၊၊
သားသမီးတွေရဲ့ စကားတွေကို ပြန်ပြောပြလိုက်ရင် အမေအို ရင်ကွဲပက်လက်ဖြစ်သွားမှာ စိုးတယ် ကျွန်တော် ထိန်းမရတဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့.ငိုချပစ်လိုက်တယ် ၊၊အမေ့ရဲ့ အဖြစ်ကို ကြည့်ပြီး ရင့်ကျိုးမရဖြစ်ခဲ့မိတယ် ကျွန်တော်ငိုတာကို အမေအိုက မြင်တော့ ဘာလို့ ငိုနေတာလဲ သား သြော် အမေ့ရဲ့.(
သားသမိးတွေဆီက ဝမ်းသာတဲ့ စကားကြားရလိူ့ပါ ဒါကြောင့်ငိုတာပါ အမေလို့ပြန်ပြောရင်း.ကျွန်တော် အမေအိုကို အိမ်ခေါ်သွားတယ် ၊၊
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ယူပါ အမေ. ဒါက အမေ့ရဲ့ သားသမီးဆီက လွှဲပေးတဲ့ ငွေတွေပါ တကယ်တော့ အဖွားအို မသိအောင်ကျွန်တော့်ရဲ့. ပိုက်ဆံအိပ်ထဲက. ငွေ ( ၂ )သိန်းကို ထုတ်ပြီး
အဖွားအိုအတွက် ကန်တော့လိုက်တာပါ ကျေးဇူးမသိတဲ့ သားတွေ ၊ သမီးတွေအတွက် ရင်လေးမိပါတယ် ၊၊မုန်းလည်း မုန်းတီးမိပါတယ် ၊၊
ရှာမကျွေးချင်နေပါ ဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့. လုပ်မကျွေးချင်နေပါ မစော်ကားကြပါနဲ့မိဘ ကျေးဇူးသိတတ်ပြီး ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ကြတဲ့ သားကောင်း ၊ သမီးကောင်း ရတနာလေးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ
Previous Article စားဝတျနရေေး အတျောလေး ခကျခဲနတေဲ့ အမကွေီးအား အလှူရှငျတှေ ကိုယျစား လိုအပျတာမြား လှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ဝဠေုကြျော
Next Article အမှနျတရားအတှကျ လှတျမွောကျနယျမွမှော စဈသငျတနျးတကျရောကျနတေဲ့ BELLA မွတျသီရိလှငျ..